Yaaddoo Ummataa Xiqqeessuuf Gaafatama Keenya Haa Bahannu ! | Kichuu
Posted on October 27, 2018 by kichuu_admin
(Ibsa ABO – Onkoloolessa 27, 2018)
Waraanni Bilisummaa Oromoo humna Bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf qabsaawaa turee fi jiru tahuun beekamaa dha. Jijjiirama yeroo ammaa haala siyaasa Itoophiyaa keessatti mul’achuu eegale kana argamsiisuu keessattis Waraana Bilisummaa Oromoo fi Qeerroo Bilisummaa Oromootiin olitti qaamni wareegama ulfaataa baase hin jiru jechuun ni danda’ama.
Jijjiiramni amma argamuu eegale kun humni tokko isa kaan injifatee irra aanuu ykn. harka kennachiisuu dhaan osoo hin taane humnootaa fi yaadota wal dura dhaabbachaa turan gidduutti araaraa fi wal hubannoota uumuudhaan haala Bilisummaa fi ol’aantummaan ummataa itti mirkanaawu argamsiisuu irratti waliigaltee mootummaa fi qabsaawota Bilisummaa ummatootaa, akkasumas, humnoota siyaasaa adda addaa gidduutti irra gahameen kan argame tahuun kan wal falamsiisu miti. Haala waliigaltee araaraa akkasii keessatti ammoo jechi “hiikkachuu fi hiikkachiisuu” jedhu yaada qajeeltummaa fi barbaachisummaas hin qabne dha. Humnootni qaama jijjiiramaa fi waliigaltee kanaa tahan hundumtuu waloodhaan fi waluma qixa qaama furmaataa kan boqonnaa itti seennee jirruu kana tahuu beekuu fi ittis amanuutu barbaachisa.
Dhimma waraanaa fi hidhannoo ilaalchisee humni waraanaa fi poolisaa jiru gara paartii siyaasaa hunda irraa (EPRDF dabalatee) walaba tahee dantaa fi nagayummaa ummataa tiksuuf dhaabbatuutti ammuma irraa jijjiiramaa deemuu haala itti danda’u uumuuf mootummaan bifa ummataaf ifaa fi amansiisaa taheen akka irratti hojjetu yaadota waliigalatee keenyaa keessa jiraachuu hubachuunis barbaachisaa dha.
Waan taheef dhimma kana irratti waliigalteen ABO fi Mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru hanga gama mootummaatiin hin faallominii fi Dhaabni komee ykn. yaaddoo yoo qabaate Ummataaf ifa hin taasisinitti jechoota hiikkachuu fi hiikkachiisuu jedhamee namoota dhimmi hin ilaalleen afarfamuun jeeqamuu fi hanga feesisuu ol yaadda’uu dhiisanii murtii fi qajeelfama Dhaabaa akka obsaan dhaggeeffatan Addi Bilisummaa Oromoo miseensotaa fi deggertoota isaatiif, akkasumas, ummata bal’aa Oromoo hundaaf dhaamsa dabarsa.
Mootummaanis gama isaatiin caasaaleen, aangawootaa fi qaamotni isaa hundi jechoota, gochaa fi sochii afanfaajjawiinsaa fi yaaddoo ummatatti bulchuu danda’an irraa of qusatanii abdii jijjiiramaa wareegama qaaliidhaan argame kana fiixaan baasuudhaan bilisummaan ummatootaa, dimokiraasiin dhugaa fi nageenyi waaraan naannoo kanatti akka mirkanaawuuf hojjechuudhaan gaafatama isaanii akka bahatan hordoffii feesisu akka godhu ni abdanna.